I-Coggle: I-Simple, Collaborative Browser-Based Mind Mapping | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 22, 2018 NgoMsombuluko, Januwari 22, 2018 Douglas Karr
Namuhla ekuseni, bengisocingweni noMiri Qualfi kusuka Ama-fanbyte futhi wayedwebe imibono ethile ngokuzayo Izingxoxo zeMartech i-podcast ku-Snapchat. Ithuluzi alivulile lalilihle - Ukuguqula.
Ukuguqula iyithuluzi eliku-inthanethi lokwakha nokwabelana ngamamephu engqondo. Isebenza online kusiphequluli sakho: akukho lutho olungalanda noma lufakwe. Noma ngabe uthatha amanothi, ucabangisisa, uhlela, noma wenza okuthile ngobuhlakani, kulula kakhulu ukubona ngeso lengqondo imibono yakho Ukuguqula. Yabelana ngemephu yakho yemibono, i-flowchart, noma umdwebo nabangani abaningi noma osebenza nabo ngendlela othanda ngayo. Izinguquko ozenzayo zizovela ngokushesha kusiphequluli sabo, noma ngabe bakuphi.
Nayi ividiyo yesingeniso ngokubuka konke kokungeza idayagramu yakho yokuqala:
Izici zeCoggle's Mind Map Solution:
Ukusebenzisana Kwesikhathi Sangempela - Mema osebenza nabo ukuthi basebenze nawe, ngasikhathi sinye, kumidwebo yakho.
Gcina Zonke Izinguquko - Bheka lonke ushintsho kumdwebo bese wenza ikhophi kunoma yiliphi iphuzu ukuze ubuyele kunguqulo yangaphambilini.
Ukulayishwa Kwezithombe Okungenamkhawulo - Hudula udonse izithombe ngqo kusuka kudeskithophu yakho uye kumidwebo yakho. Akunamkhawulo enanini lezithombe ongazengeza.
Faka umbhalo nezithombe ezintantayo - Faka amalebula ombhalo nezithombe ezingeyona ingxenye yomuthi womdwebo ukuze uchaze izingxenye zemephu yakho.
Ukubhalisela okukhokhelwayo kunika amandla izici ezilandelayo:
Imidwebo yangasese engenamkhawulo - Dala imidwebo eminingi yangasese njengoba uthanda. Uma kwenzeka ukhansela ukubhalisa kwakho kuhlala kuyimfihlo, futhi ugcina ukufinyelela.
Dala izihibe bese ujoyina amagatsha - Joyina amagatsha bese wenza izihibe ukudala imidwebo enamandla futhi eguquguqukayo emelela ukugeleza kwenqubo nezinye izinto ezithuthukile.
Ukubambisana okungekho ukusetha - Vumela noma yiliphi inani labantu ukuhlela umdwebo ngokumane babelane ngesixhumanisi esiyimfihlo nabo. Akukho ukungena ngemvume okudingekayo.
Amaphuzu amaningi okuqala - Faka izinto eziningi ezimaphakathi kwimidwebo yakho ezihlokweni ezihlobene nemephu endaweni yokusebenza eyodwa.
Qala ukusebenzisa i-Coggle Mahhala Namuhla!
Ukudalula: Ngisebenzisa imali yami yokudlulisa yeCoggle ngaphakathi kwalokhu okuthunyelwe.
Tags: ukusebenzisana okususelwe kusiphequluliukuguqulangokubambisanaumdweboimidvweboamashadi okugelezaukulayishwa kwesithombeibalazwe lomqondoukuklanywa kwengqondoukusebenzisana online